USolwazi wase-UKZN uPrecious Sibanda, uMengameli omusha we-South African Mathematical Society, ngosuku lwe-International Mathematical Union e-African Institute for Mathematical Science eKapa.
UMholi weziFundo zeziBalo ophikweni lwaseMgungundlovu, uSolwazi Precious Sibanda, uzoba nguMengameli we-South African Mathematical Society (i-SAMS) amahlandla amabili.
USibanda - oneminyaka eli-17 engumfundisi wase-UKZN - uyaziwa ngamagalelo akhe endimeni yezocwaningo nezindlela zokusetshenziswa kwezibalo nokubumba uketshezi ngendlela yezibalo.
Waqeda iziqu zakhe zokuqala neze-onazi e-University of Zimbabwe, wayokwenza iziqu ze-mastazi nezobudokotela e-University of Manchester eNgilandi, lapho enza khona ucwaningo ekusetshenzisweni kwezibalo ngemuva kokungenwa wuthando lwalezi zifundo ezifundweni zakhe zokuqala.
USibanda wasebenza e-University of Zimbabwe iminyaka eminingi ngaphambi kokuthi aqale ukusebenza e-UKZN.
‘Izimo zoketshezi zithinta yonke into. Yonke into esithintayo ingabukwa ngeso lokuba wuketshezi ezimweni ezithile,’ kusho uSibanda. ‘Sibhekana noketshezi cishe kuyona yonke into esiyenzayo.’
USibanda ucwaninge ngokugeleza koketshezi emingceleni, akuchaza njengokugeleza ngasezindaweni ezomile nokuhlangana kokuqinile nokutshezi nokudlula kokushisa kudlulela ezindaweni ezihlukene njengezindawo ezihlukene ezomile neziwuketshezi, ezidlulisa ukushisa.
USibanda useke wahlanganisa izindlela ezihlukene zokubala nezinto ezithinta uketshezi, lezi zokugcina zaba nezisombululo ezibalweni ezihlukene ezivela ezintweni eziwuketshezi.
Waqala inkundla yokucobelelana ngolwazi yaminyaka yonke ngezindlela zokubala ngama-differential equations eMgungundlovu esineminyaka eyi-12 idonsa abafundi abenza iziqu zobudokotela ezibalweni nezifundiswa ezincane zasezikhungweni ezehlukene eNingizim Afrika nasemazweni angomakhelwane.
Umlenze we-13 walesi sigcawu kuhlelwe ukuthi uzoba sekupheleni kukaJuni ngowezi-2020.
Elinye igalelo likaSibanda emKhakheni wakhe e-School of Mathematics, Statistics and Computer Science (e-SMSCS) wukuchushisa izifundiswa ezisafufusa. Kumanje ufukamele abasebenzi abahlanu bomnyango wezibalo ophikweni oluseMgungundlovu.
‘Ngifisa ukubamba iqhaza ekukhiqizeni abantu abahlakaniphile, abazikhandlayo ababukhali emisebenzini yocwaningo neyokuphatha ezikhungweni zemfundo ephakeme,’ kusho uSibanda.
USibanda usebenze ngokuzikhandla ukuqinisekisa ukusungulwa kwe-pure mathematics njengomkhakha okungagxilwa kuwona ophikweni oluseMgungundlovu, lapho iningi lalaba bafundi abenza iziqu ze-onazi zigqile kwi-pure mathematics.
Usenze imisebenzi eminingi kule nhlangano kusukela ngo-2018, okubalwa ukuba yiphini likamengameli nomgcinimafa wayo. Inabalingani bayo, le nhlangano ineqhaza elikhulu emikhankasweni eminingi njenge-National Graduate Academy for Mathematical and Statistical Sciences ukukhiqiza nokwandisa osozibalo ezweni. EnguMengameli we-SAMS, uSibanda ufisa ukwenza umkhakha wezibalo waseNingizimu Afrika ube negama elihle emhlabeni kanti usebenza ngokuzikhandla ukuqinisekisa ikusasa lenhlangano, lapho eyimela emazingeni amaningi ehlukene.
USibanda uthe iNingizimu Afrika igabe ngezinto ezinhle ezincane eziningi kwezezibalo kanti ufisa ukubona kwanda ukuxhaswa kwezitshudeni ezenza iziqu eziphezulu ezibalweni ukwandisa ubungoti ezibalweni ezivelele, ikakhulukazi kwezabantu abamnyama.
USibanda, oseke waklonyeliswa ngokuba wuthisha ovelele i-Distinguished Teacher eKolishi lezoLimo, ezobuNjiniyela nezeSayensi, usekhiqize izitshudeni ezingodokotela ezingaphezu kweshumi nezingaphezu kwaloko ezineziqu ze-mastazi eminyakeni engaphezu ngengamashumi amabili aqala ukusebenza. Ubalwa nabacwaningi osekushicilelwe amaphepha abo ocwaningo abangama-30 abavelele baseNyuvesi kanti uyilungu le-Academy of Science of South Africa.
‘Siyakubonga osekwenziwe uSolwazi Sibanda kulo mKhakha, ikakhulu indlela akwaze ngayo ukukhuthaza nokucathulisa osozibalo abancane,’ kusho i-Dean neNhloko ye-SMSCS uSolwazi Delia North.